Tirada dadka u geeriyooday Coronavirus oo dhaaftay 100,000 |
Tirada dadka u geeriyooday Coronavirus oo dhaaftay 100,000
Tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay 103,546 qof iyadoo dad ka badan 1.7 milyan oo qofna uu cudurku ku dhacay caalamka oo dhan.
Gobolka New York oo ah xuddunta COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa saraakiishu waxa ay sheegayaan inuu hoos u dhacayso tirada dadka u baahn qeybta xanaanada degdega ee cisbitaallada iyo kuwa cisbitaalada la geeyaba markii u horreysay ilaa bartamihii bishii March.
Gobolka New York ayaa shalay soo wariyey in inkabadan kala bar 18 kun oo qof oo Maeykanka uu ku dilay ay ahaayeen dadka reer New York. Goobaha kale ee uu cudurkani aad u saameeyey ka mid ah Gobolka Louisiana, magaalooyinka Detroit iyo Washington DC.
Dalka Ingiriiskana, Ra’iisulwasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa ka soo kabanaya cudurka COVID-10, xilli dalkaasi ay shalay u ahayd maalintii ugu dhimasho badneyd. 980 qof ayaa la soo wariyey in ay ku geeriyoodeen Britain taasi oo tirada guud ee dadka uu dilay COVID-19 ka dhigtay 9,000.
Dalka Faransiiska ayaa isna soo wariyey in tirada dhimashadu ay sare u kacday iyadoo ay Jimcadii shalay u ahayd maalin kale oo adag oo ay dalkaasi ku geeriyoodeen ku dhowaad kun qof taasi oo ka dhigeysa tirada dadka cudurkan ugu geeriyooday Faransiiska 13,197 qof.
Ra’iisulwasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa kordhiyey muddada xayiraadda guud dalkaasi oo haatan ku eg 3-da bisha May. Talyaaniga ayaa ah dalka soo wariyey dhimashada ugu badan ee coronavirus dunida oo dhan.
AP iyo REUTERS
Madaxwaynaha Meel Uu Ka Galgashaa Uma Bananee Inagu Yaynaan Ku…